Umbala omnyama uya kubandakanywa njengoluhlu olutsha kwi-Apple TV + | Ndisuka mac
Imicimbi emnyama ifakiwe njengothotho olutsha kwi-Apple TV +
UManuel Alonso | | Apple TV
UMatt Tolmach, umvelisi weefilimu zentshukumo kunye nee-blockbusters ezinje ngeVenom, uJumanji: Wamkelekile kwiJungle kunye neSigcawu-Indoda: Ukufika ekhaya, uye wadibana neApple ukuvelisa uthotho olutsha oluqinisekileyo ukuba luyabetha. Ngokusekwe kwinoveli enempumelelo kunye namava okuba ngaphambili uphuhlise ifilimu yeSony. Into emnyama ifikelela kubaphulaphuli abakumgangatho weApple TV +.
Imicimbi emnyama iya kuba luthotho lwempumelelo phantse ngokuqinisekileyo ngezinto ezikhoyo ngaphambili. Iya kukhutshwa eqongeni apho umgangatho uphumelela ubungakanani kwaye uzabalazela ukuba phakathi kwezona zibalaseleyo. UMat tolmach ngubani owakhe wavelisa i-blockbuster kunye ne-blockbuster bhanyabhanya njengeVenom. Kodwa kukwavela ukuba uthotho luza yandulelwa yifilimu yeSony ngumvelisi omnye, ukuba ngoku into eza kuyenza kukuziqhelanisa nefomathi ye-serial.
Ngokusekwe kwincwadi yenoveli Umcimbi omnyama kaBlake Crouch. Ichazwe njengomxholo ophakamileyo we-sci-fi kwi-vein yeMemento neLooper. Ibali kuthiwa liphonononga iindlela ezinje ngeendlela ezihanjisiweyo nezingathathwanga, kunye nokuba siza kude kangakanani ukubuyisa ubomi esibuphuphayo. UCrouch wathengisa amalungelo okupapasha nge- $ 1 yezigidi. Wenza enye i-1,25 yezigidi zeedola kwintengiso yencwadi eya ku-Sony kwisivumelwano se-2014.
Incwadi yayithengiswa kwangoko yiNew York Times eyayipapashwe ngeelwimi ezingama-35. Yakhethwa njengenye yeencwadi ezilungileyo zonyaka ka-2016 kwiAmazon. Kwiminyaka emine emva koko, kwabhengezwa uguquko lwayo olucokisekileyo, apho singenawo umhla wokucwangciswa kokufota, kungasathethwa ke ngomhla wokukhutshwa. Inyaniso Kuya kufuneka silinde iApple ukuze iqinisekise le manyano noMat Tolmach ukuqinisekisa ukuba kuyinyani.
Umendo opheleleyo kwinqaku: Ndisuka mac » Iimveliso ze-Apple » Apple TV » Imicimbi emnyama ifakiwe njengothotho olutsha kwi-Apple TV +
IPixelmator Pro ngexabiso lesiqingatha sexesha elimiselweyo
Ii-AirPods Max azinayo i-chip ye-U1 ngaphandle kwamahemuhemu